The Pyidaungsu Hluttaw
The Pyithu Hluttaw
The Amyotha Hluttaw
The Region Hluttaw or The State Hluttaw
Member of Parliament/ Parties
Defence Services Personnel as MPs
မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည့် အန္တရာယ်ရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် AIPA အကြံပေးကောင်စီ၏ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက် နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၉
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ အာဆီယံပါလီမန်များညီလာခံ(AIPA)ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးဇော်သိန်း ခေါင်းဆောင်သည့် မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့၊ နံနက် ၀၈:၀၀ နာရီတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည့် အန္တရာယ်ရှိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် AIPA အကြံပေးကောင်စီ၏ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး (3rd AIPACODD Meeting)သို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေး၌ ဗီယက်နမ်အမျိုးသားလွှတ်တော် 1st Vice-President - H.E. Mdm. Tong Thi Phong နှင့် AIPA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ Ms. Nguyen Tuong Van တို့က အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂရုံး (UNODC) မှ ကိုယ်စားလှယ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အာဆီယံအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအဖွဲ့ (ASOD)၏ ကိုယ်စားလှယ်တို့က COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးကာကွယ်တားဆီးခြင်း အခြေအနေများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှုနှင့် သုံးစွဲမှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြကြပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ အလုပ်သမား၊ မသန်စွမ်းသူများ (War Invalids)နှင့် လူမှုရေးရာဝန်ကြီးဌာနက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကုသခြင်းနှင့် ကာကွယ်တားဆီးခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခဲ့သည်။
AIPA အဖွဲ့ဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များက နိုင်ငံအလိုက် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ၊ အတွေ့အကြုံများကို အပြန်အလှန်မျှဝေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းအစည်းအဝေး၌ “Turning Words into Actions towardsaDrug-free ASEAN Community” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆိုမူကြမ်းကို ဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆို မူကြမ်း တွင် “COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်တွင် ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြဿနာများကို ထိရောက်စွာကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များပေးခြင်း၊ အစီအမံများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ဒေသတွင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်” တိုက်တွန်းထားသည်။
ထို့နောက် ဗီယက်နမ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ Mdm. Nguyen Thuy Anh က နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြား၍ အစည်းအဝေးကို မွန်းတည့် ၁၂:၀၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ AIPA ပူးပေါင်းကော်မတီဝင်များဖြစ်ကြသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရွှေရွှေစိန်လတ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်ထူးအောင်နှင့် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာပြည့်စုံဝင်းတို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ...
ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင် နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E MS. TONE TINNES အား လက်ခံတွေ...
You may send your suggestions on the bills to the address : myanmarparliament@pds.hluttaw.mm at 067- 5911170.
You can get the up-dated news of the parliament by subscribing on Facebook, Twitter, RSS feeds and the following mails.